Ogwurugwu Infrared Ogologo Ogologo Ogologo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwurugwu Infrared Ogologo Ogologo Ogologo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ogwurugwu Infrared Ogologo Ogologo Ogologo)
Nkọwapụta ngwaahịa: Mgbe ị na-enwe oyi na oyi , ndị a dị mma, na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ ga-ejide aka gị na-ekpo ọkụ ma chekwaa. Onyonyo ọ bụla nwere batrị dị arọ, batrị nwere ike ịgbapụta ngwa ngwa ma rụọ ọrụ maka awa asatọ na otu ụgwọ. A na-ekpo ọkụ ọkụ, ọbụna ruo mkpịsị aka gị, ọ na-adị mfe idozi. Atụmatụ: 1.Ọdịmma ihe...
Nkọwapụta ngwaahịa Ngwaahịa anyị na-enye gị nnukwu ihe ngwọta maka kpo oku n'ụzọ dị mfe ma dị mma. Anyị na-enye gị ọkụ ebe ọ kachasị mkpa maka nkasi obi ka mma. N'ebe a na-ekpochapu sistema anyị, ị gaghị echegbu onwe gị banyere oyi na oyi. Anyị na-enye gị ngwaahịa dị mma n'ahịa asọmpi. Igwe ihe ọkụkụ a...
Nkọwapụta ngwaahịa Mkpụrụ akwụkwọ carbon crystal, nke nwere ụzarị ọkụ ọkụ na-acha ọkụ. Mmiri na-egbukepụ nke ọma na-ahụ maka ọrụ ahụike. Site na nka na uzu ohuru nke oma na-acho uzo di iche iche (PTC), o bu nduzi onwe ya, o di mma ma zoputa ya. Mmiri mmiri, na-agbanwe agbanwe ma na-adịgide adịgide Mgbanwe akụrụngwa dị...
Nkọwapụta ngwaahịa Ebe a na-ekpofu sulu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ihe PET dị na ya. Site na ngbanwe nke okpukpo ọkụ dị elu nke kpo oku, a na-eme ka okpueze ceramic tiivi dị na minit ole na ole. Ihe onwunwe nke radiation radra infrared, nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee nkasi obi dị mma maka ahụ ike mmadụ. Ọ bụghị naanị...
Ogwurugwu Infrared Ogologo Ogologo Ogologo Ngwurugwu Infrared Na-ekpocha akwa Igwe Egwuregwu Infrared Na-egwuri egwu na Infrared Na-egwu egwu na Infrared Ngwá Ngwá Egwuregwu Infrared Ogwu Ogwu Ogwu Ogwu Ogwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu